FIX AAN AWOODIN IN LAGU XIDHO SERVER-KA WAKIILKA GUDAHA WINDOWS 10 - JILICSAN
Fix Aan awoodin in lagu xidho server-ka wakiilka gudaha Windows 10
Hagaajin kari la' in lagu xidho server-ka wakiilka gudaha Windows 10: Server-ka wakiilku waa adeege u shaqeeya sidii dhex dhexaadiye u dhexeeya kombayutarkaga iyo serferada kale. Hadda, nidaamkaaga waxa loo habeeyey inuu isticmaalo wakiil, laakiin Google Chrome kuma xidhi karo.
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyin: Haddii aad isticmaasho server wakiil, hubi goobaha wakiilkaaga ama la xidhiidh maamulaha shabakadaada si aad u hubiso in server-ka wakiilku shaqaynayo. Haddii aadan aaminsanayn in aad isticmaalayso wakiil wakiil, hagaaji goobaha wakiilkaaga: Tag menu-ka Chrome- Settings- Show settings horumarsan... - Beddel goobaha wakiilnimada . Cilad 130 (net:: ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED): Xidhiidhka serfarka wakiilku waa fashilmay.
Dhibaatooyinka uu keeno fayraska Proxy:
Daaqadaha si toos ah uma ogaan karin goobaha wakiillada ee shabakadan.
Iskuma xidhi karo intarneedka, Khalad: ma heli karo server-ka wakiilka.
Fariinta Khaladka: Lama awoodi karo in lagu xidho Server-ka wakiilka.
Firefox: Adeegaha wakiilku waxa uu diidayaa isku xidhka
Adeegaha wakiilku kama jawaabayo.
Xidhiidhkii ayaa go'ay
Xiriirkii dib ayaa loo dajiyay
Hagaajin kari la' in lagu xidho server-ka wakiilka gudaha Windows 10
Habka 1: Dami Settings Proxy
Habka 2: Dib u deji Settings intarneedka
Habka 3: Cusbooneysii Google Chrome
Habka 4: Orod dib u dejinta Netsh Winsock Command
Habka 5: Beddel cinwaanka DNS
Habka 6: Tirtir Furaha Diiwaanka Server-ka Wakiil
Habka 7: Ku socodsii CCleaner
Habka 8: Dib u dabee Browser Chrome
1. Riix Windows Key + R ka dibna ku qor msconfig oo ku dhufo OK.
2. Dooro boot tab iyo calaamad Boot badbaado leh . Kadib dhagsii Codso oo OK.
3. Hadda dib u bilow PC-gaaga oo uu geli doonaa Habka Nabdoon .
4. Marka uu nidaamka ku bilaabo Safe Mode ka dibna taabo Windows Key + R oo ku qor inetcpl.cpl.
5. Ku dhufo OK si aad u furto Internet Properties oo halkaas ka beddelo Xiriirada tab.
6. Guji kan Dejinta LAN badhanka hoose ee hoos yimaada Shabakadda Aagga Deegaanka (LAN) Settings.
7. Iska saar U isticmaal server wakiil LAN ah . Kadib dhagsii OK.
8. Mar labaad fur msconfig iyo ka saar boot Safe option ka dibna ku dhufo Codso oo ay ku xigto OK.
9. Dib u bilow kombayutarkaga si aad u badbaadiso isbedelada.
1. Riix Windows Key + R ka dibna ku qor inetcpl.cpl oo ku dhufo gal si aad u furto Internet Properties.
2. Daaqada Settings intarneetka, u beddel Sareeye tab.
3. Guji kan Badhanka dib u dajin iyo Internet Explorer ayaa bilaabi doona habka dib u dejinta.
4. Dib u kici kombayutarka oo hubi haddii aad awoodid hagaajin kari la' in lagu xidho server-ka wakiilka gudaha Windows 10.
1. Fur Google Chrome ka dibna dhagsii saddex dhibcood oo toosan (Menu) laga bilaabo geeska kore ee midig.
2. Ka dooro liiska I caawi dabadeed dhagsii Ku saabsan Google Chrome .
3. Tani waxay furi doontaa bog cusub, halkaas oo Chrome uu hubin doono wixii cusbooneysiin ah.
4. Haddii wax cusub la helo, hubi inaad ku rakibto browser-kii ugu dambeeyay adiga oo gujinaya Cusbooneysii badhanka.
5. Marka la dhammeeyo, reboot your PC si aad u badbaadiso isbedelada.
1. Midig ku dhufo badhanka Windows oo dooro Talada degdega ah (Admin).
2. Hadda ku qor sidan soo socota oo ku dhufo geli mid kasta ka dib:
netsh int ip dib u dajin
netsh winsock dib u dejin
3. Dib u bilow si aad u codsato isbeddelada.
Amarka dib u dejinta Netsh Winsock ayaa u muuqda hagaajin kari wayday in lagu xidho khaladka server-ka wakiilka.
Mararka qaarkood DNS aan sax ahayn ama khaldan ayaa sidoo kale sababi kara Aan awoodin in lagu xidho server-ka wakiilka qaladka ku jira Windows 10. Haddaba sida ugu wanaagsan ee lagu xallin karo arrintan waa in loo beddelo OpenDNS ama Google DNS ee Windows PC. Markaa iyada oo aan wax kale oo dheeraad ah, aan aragno sida loogu beddelo Google DNS gudaha Windows 10 si ay u hagaajin kari la' in lagu xidho qaladka server-ka wakiilnimada.
1. Riix Windows Key + R ka dibna ku qor regedit oo ku dhufo Gelida si aad u furto Registry Editor.
2. U gudub furaha diiwaangelinta:
3. Dooro goobaha Internetka ka dibna midig-guji Furaha ProxyEnable (daaqadda dhinaca midigta ah) iyo dooro Delete.
4. Raac tillaabada kore ee Furaha ProxyServer sidoo kale.
5. Xir wax walba oo dib u bilow kombayutarkaga si aad u badbaadiso isbedelada.
Haddii habka kor ku xusan uu ku shaqeyn waayo, socodsiinta CCleaner ayaa laga yaabaa inay ku caawiso:
mid. Soo deji oo rakib CCleaner .
2. Double-guji setup.exe si aad u bilowdo rakibidda.
3. Guji kan Ku rakib badhanka si loo bilaabo rakibaadda CCleaner. Raac tilmaamaha shaashadda si aad u dhammaystirto rakibidda.
4. Ka bilow arjiga oo ka dooro dhinaca bidix ee liiska Caado.
5. Hadda eeg haddii aad u baahan tahay inaad calaamadiso wax aan ahayn goobaha caadiga ah. Marka la sameeyo, dhagsii Falanqaynta.
6. Marka falanqayntu dhammaato, dhagsii Ku socodsii CCleaner badhanka.
7. U oggolow CCleaner inay socodsiiso koorsadeeda tani waxay tirtiri doontaa dhammaan kaydinta iyo cookies-ka ee nidaamkaaga.
8. Hadda, si aad u nadiifiso nidaamkaaga, dooro tab diiwaanka, oo hubi in waxyaabaha soo socda la hubiyay.
9. Marka la sameeyo, guji Ka baadh arrimaha badhanka oo u ogolow CCleaner inuu iskaan karo.
10. CCleaner wuxuu tusi doonaa arrimaha hadda jira Diiwaanka Daaqadaha , si fudud guji Hagaajinta Arrimaha la doortay badhanka.
11. Marka CCleaner ku weydiiyo Ma doonaysaa in dib u habeyn lagu sameeyo diiwaanka? dooro Haa
12. Marka kaydintaadu dhammaato, dooro Hagaaji Dhammaan Arrimaha la soo xulay.
13. Reboot your PC si aad u badbaadiso isbedelada.
Habkani waxa uu u muuqdaa Fix Aan awoodin in lagu xidho server-ka wakiilka gudaha Windows 10 Xaaladaha qaarkood oo nidaamka uu saameeyay malware-ka ama fayraska awgeed. Haddii kale, haddii aad leedahay iskaanka fayraska ama Malware-ka dhinac saddexaad, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa si aad uga saarto nidaamkaaga barnaamijyada malware-ka ah. Waa inaad ku sawirtaa nidaamkaaga software ka-hortagga fayraska iyo isla markiiba ka takhalus wixii malware ama fayraska aan la rabin .
Si aad Google Chrome ugu soo celiso dejintiisa caadiga ah raac tillaabooyinka hoose:
1. Guji icon saddex dhibcood laga heli karo geeska sare ee midig.
2. Guji kan badhanka dejinta ka menu ka furmaya.
3. Hoos ugu dhaadhac xagga hoose ee bogga Settings oo guji Sareeye .
4. Isla markaad gujiso Advanced, dhanka bidix ka dhagsii Dib u deji oo nadiifi .
5. Hadda udib u deji oo nadiifi tab, guji Ku soo celi dejinta qaab-dhismeedkoodii asalka ahaa .
6.Sanduuqa wada-hadalka ee hoose ayaa furmi doona kaas oo ku siin doona dhammaan faahfaahinta ku saabsan waxa soo celinta dejinta Chrome ay sameyn doonto.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan sii wadin si taxadar leh u akhri macluumaadka la siiyay iyadoo markaas ka dib ay horseedi karto luminta macluumaad ama xog muhiim ah.
7. Kadib markaad hubiso inaad rabto inaad Chrome ku soo celiso goobihiisii ​​asalka ahaa, dhagsii Dib u deji dejinta badhanka.
Markaad isku dayday inaad ka joojiso iyada oo loo marayo goobaha LAN, laakiin waxay ka soo baxaysaa Light Gray oo ma ogolaan doonto inay wax ka bedesho? Mise ma bedeli karaan goobaha wakiilnimada? Ka saar sanduuqa ku yaal goobaha LAN, sanduuqa dib u fiiri? Ku socodsii Malwarebytes Anti-Malware si aad uga saartid rootkit kasta ama malware-ka PC gaaga.
Waxaan rajeynayaa in tillaabooyinka kore ay ahaayeen kuwo waxtar leh oo aad awoodid hagaajin kari la' in lagu xidho server-ka wakiilka gudaha Windows 10 qalad laakiin haddii aad wali wax su'aalo ah ka qabtid boostada waxaad xor u tahay inaad ku waydiiso faallooyinka.